စာပေဟောပြောပွဲ အသံဖိုင် MP3များကို ဒါန ပြုပါသည် ။ - မြန်မာသူငယ်ချင်းများအဖွဲ့
စာပေဟောပြောပွဲ အသံဖိုင် MP3များကို ဒါန ပြုပါသည် ။
(ယုန်ကလေး သူရ က ဇွန်လ 22, 2011 နေ့ 3:28pm မှာတင်ခဲ့ပါတယ်) ဒေါင်းလော့ Zone
သူငယ်ချင်းတို့ရေ.. စာပေချစ်သူတွေ မို့ စာပေဟောပြောပွဲလေးတွေလည်း နားထောင်ချင်လိမ့်မယ်..
ဆွေးနွေးချက်မှာ တင်လိုက်တာကတော့ နောက်ပိုင်း ဆွေးနွေးလို့ရအောင်ပါ...
နှစ်သက်ရင် တစ်ခွန်းလောက်တော့ ကွန်းမန့်ရေးခဲ့ပါ.. ဒါမှ main page မှာ ပေါ်နေမယ်ထင်တယ်နော်..
ဒါမှ သူငယ်ချင်းများများ သိပြီး ဒေါင်းယူ နားထောင်နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်..
အက်ဒမင်များလည်း ကူညီပြီး ပြောပြပေးကြပါဦး..
စာပေဟောပြောပွဲ - ၂၉ မေလ ၂၀၁၁ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်
၁၊ လမင်းဖမ်းပွဲ - အကြည်တော်
၂၊ ကျွန်တော်ခံစားမိသလို ပြောဆိုပါမည် - ချစ်ဦးညို
၃၊ ကိုယ်ကျင့်ရင် ပညာ - အောင်သင်း
၁၊ ဗုဒ္ဓပညာ (ရွှေညဝါ) နန္ဒာသိန်းဇံ၂၊ အမေစားသော ထမင်းတစ်နပ် ဦးသုခ၃၊ အဘိဓမ္မာမှပေးသော ဘဝအမြင် (ရွှေညဝါ)ဒေါက်တာ မင်းတင်မွန်၎၊ တန်ဖိုးရှိတဲ့လူ (မော်လမြိုင် ) အတ္တကျော် ၅၊ စိတ်မျက်စိကို ဖွင့်ရအောင် အတ္တကျော် ၆၊ ကနောင်အလွမ်း၊ ထူးဆန်းထွေလာမြေကမ္တွာ(ကနောင်) အောင်ကျော်ဆန်း၇၊ ရေးသူ၏ ပရိယာယ်၊ ဖတ်သူ၏ ခံစားမှု (ရိူင်းဟုတ်) အောင်ပြည့်၈၊ လူနှင့် ပညာ (ဟင်္သာတ) အောင်သင်း၉၊ လူငယ်တွေနဲ့ အနာဂတ် (ကျောက်ပန်းတောင်း) အောင်သင်း ၁ဝ၊ အမွေ (YMCA) အောင်သင်း၁၁၊ ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ အောင်သင်း၁၂၊ လက်ခံလိုက်စမ်းပါ (စာပေလောက) အောင်သင်း၁၃၊ လူနှင့် ပညာ (အသုတ်) အောင်သင်း၁၄၊ ပညာ (မုံရွာ) အောင်သင်း၁၅ ယနေ့လူငယ်နှင့် ယနေ့ရသစာပေ (မကွေး) အောင်သင်း ၁၆၊ ယနေ့ လူငယ် ဘ0xlaxာင်မှု (ပျော်ဘွယ်) အောင်သင်း၁၇၊ ဗမာတွေ ပျော်ကြပါစေ (ကနောင်) အော်ပီကျယ်၁၈၊ ဗမာတွေ ပျော်ကြပါစေ ( စင်္ကာပူ ၂ဝ၁ဝ) အော်ပီကျယ်၁၉၊ အသိပညာဖြင့် မောင်းနှင်သော (ဟင်္သာတ) အော်ပီကျယ်၂ဝ၊ အသိပညာဖြင့် မောင်းနှင်သော (အောင်လံ) အော်ပီကျယ် ၂၁၊ အသိပညာဖြင့် မောင်းနှင်သော (မော်လမြိုင်) အော်ပီကျယ်၂၂၊ ပျော်ရာမှာမနေရ၊ တော်ရာမှာနေရ (UAE) အော်ပီကျယ်၂၃၊ ဘဝအရေးနှင့် ကာတွန်းအတွေး (အသုတ်) အော်ပီကျယ်၂၄၊ လူသစ် စိတ်သစ် (အုန်းနှဲ) ချစ်နိုင် (စိတ်ပညာ) ၂၅၊ စကားလက်ဆောင် (ရှိုင်းဟုတ်) ချစ်နိုင် (စိတ်ပညာ)၂၆၊ ၂၁ ရာစု၏ စိမ်ခေါ်မှုကို ရင်ဆိုင်ခြင်း (ရှိုင်းဟုတ်) ချစ်ဦးညို၂၇၊ အနုပညာဖန်တီးသူနှင့် အနုပညာခံစားသူ (စင်္ကာပူ) ချစ်ဦးညို၂၈၊ သို့ ကျောက်ပန်းတောင်း (ကျောက်ပန်းတောင်း) ချစ်ဦးညို ၂၉၊ ကျွန်တော် ခံစားမိသလို ပြောဆိုပါမည် - ၂ (မြောင်းတကာ) ချစ်ဦးညို၃ဝ၊ သို့ မော်လမြိုင်၊ မှ ချစ်ဦးညို ချစ်ဦးညို၃၁၊ ကျွန်တော်ခံစားမိသလို ပြောဆိုပါမည် (မြင်းခြံ) ချစ်ဦးညို၃၂၊ သို့ အုန်းနှဲ၊ မှ ချစ်ဦးညို ချစ်ဦးညို ၃၃၊ သို့ တောင်ငူ၊ မှ ချစ်ဦးညို (တောင်ငူ) ချစ်ဦးညို ၃၄၊ ဇရပ်ကုန်းအတွက် စာပေလက်ဆောင် (မြောင်) ချစ်ဦးညို၃၅၊ အနုပညာ ဖန်တီးသူနှင့် အနုပညာ ခံစားသူ (အသုတ်) ချစ်ဦးညို၃၆၊ နည်းပညာ (ရွှေညဝါ) ချစ်ဦးညို၃၇၊ အမေဟူသည် အလွမ်းသည် ချစ်စံဝင်း ၃၈၊ စိတ်ဓါတ်ြုပပြင် ပြောင်းလဲမြှင့်တင်ရေး ဒေါက်တာ ခင်မောင်ညို၃၉၊ လူတိုင်းအတွက် အသုံးချစိတ်ပညာ (ရှိုင်းဟုတ်) ဒေါက်တာ ကျော်စိန်၎ဝ၊ ဟန်ချက်ညီ စိတ်ထား (ရှိုင်းဟုတ်) ဒေါက်တာ သိန်းလွင်၄၁၊ ရယ်စရာ မောစရာ (ရှိုင်းဟုတ်) အီကြာကွေး ၄၂၊ အသိပညာဖြင့်ြုပပြင်ပြောင်းလဲရမည့် ဤကမ္ဘာ ဟိန်းလတ်၄၃၊ ဆဒ္ဒန်ဆင်မင်းဇတ်မှ လူ့သဘာဝ (မော်လမြိုင်) လှထွန်း (မြန်မာစာ)၄၄၊ စိတ်ပညာနှင့် ယဉ်ကျေးမှု (ရှိုင်းဟုတ်) သိပ္ပံ မှူးတင်၄၅၊ စာရေးဆရာ၏မှတ်စု (စင်္ကာပူ ၂ဝဝ၉) ဂျူး
၄၆၊ ဘဝနှင့်စာပေ (မော်လမြိုင်) ဂျူး၄၇၊ စာရေးဆရာ၏တစ်ယောက်၏ မှတ်စုများ (မြင်းခြံ) ဂျူး၄၈၊ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ (တောင်ငူ) ဂျူး၄၉။ စာဖတ်ပါ၊ တွေးပါ (ကျောက်ပန်းတောင်း) ကောင်းသန့် ၅ဝ။ စာပေရေးရာ (မြောင်းတကာ) ကောင်းသန့် ၅၁၊ ဘ၀ထဲက စာများ ခက်မာ၅၂၊ စာပေရေးရာ (မော်လမြိုင်) ခင်ခင်ထူး ၅၃၊ အညာဓလေ့ ရွာဓလေ့ (တောင်ငူ) ခင်ခင်ထူး ၅၄၊ အမွေခံထိုက်စေ (မော်လမြိုင်) ကိုတာ၅၅၊ ပုံပြင်များ (မော်လမြိုင်) ကျော်ရင်မြင့် (ဖေလင်းသစ်) ၅၆၊ လမ်းပေါ်မှာ(တောင်ငူ) ကျော်ရင်မြင့် (ဖေလင်းသစ်)၅၇၊ ဘဝ အောင်မြင်ရေး (မော်လမြိုင်) ကြည်မင်း (ကျော်စောမင်း)၅၈၊ ဗျူတီပါလာနှင့် မဟာသြသဓ (ရှိုင်းဟုတ်) ကြည်မင်း (ကျော်စောမင်း)၅၉၊ ဘဝမှစာ၊ စာမှဘဝ (ကျောက်ပန်းတောင်း) လယ်တွင်းသား စောချစ် ၆ဝ၊ ဘဝမှစာ၊ စာမှဘဝ (တောင်ငူ) လယ်တွင်းသား စောချစ်၆၁၊ ဘဝမှစာ၊ စာမှဘဝ (မင်္ဂလာဒုံ) လယ်တွင်းသား စောချစ်၆၂၊ မျှတသော စိတ်ထား (ရှိုင်းဟုတ်) လယ်တွင်းသား စောချစ်၆၃၊ စာပေနှင့် ဘဝအောင်မြင်ရေး လယ်တွင်းသား စောချစ် ၆၄၊ သန့်စင်လှပ အိမ်ရှင်မ (ရှိုင်းဟုတ်) လဲ့လဲ့တင်၆၅၊ အမျိုးသားရေး တေးဂီတ (၂ဝဝ၉) မာမာအေး၆၆၊ စာဖတ်ခြင်း အနုပညာ မေငြိမ်း၆၇၊ ကျန်းမာရေး (ရှိုင်းဟုတ်) မောင်မောင်လှိုင် (အပ်စိုက်ကု)၆၈၊ ဘဝမရှုံးသူများ (ရှိုင်းဟုတ်) မောင်စိန်ထွေး ၆၉၊ သုတရသစာပေ (ကျောက်ပန်းတောင်း) မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း)၇ဝ၊ ရသစာပေ (စင်္ကာပူ ၂ဝ၁ဝ) မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း)၇၁၊ သုတရသစာပေ (မင်္ဂလာဒုံ) မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း)၇၂၊ သုတရသစာပေ (မြောင်) မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း) ၇၃၊ ရသစာပေ (အသုတ်) မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း)၇၄၊ အမျိုးသားနေ့ မောင်စွမ်းရည်၇၅၊ ရယ်စရာ မောစရာ (ကနောင် ၂ဝ၁ဝ) မောင်သာချို၇၆၊ နှလုံးသားကို အလှဆင်ပါ (မြောင်းတကာ ) မောင်သာချို၇၇၊ နှလုံးသားကို အလှဆင်ပါ (မော်လမြိုင် ) မောင်သာချို ၇၈၊ နှလုံးလှပါစေ (အောင်လံ ၂ဝ၁၁) မောင်သာချို၇၉၊ ဘဝအလှအတွက် စာအလှများ (ကျောက်ပန်းတောင်း) မောင်သာချို၈ဝ၊ စာအလှမှ ရွာအလှသို့ (တောင်ငူ) မောင်သာချို၈၁၊ တကယ့်လူ မောင်သာချို၈၂၊ မိခင်ဖြစ်လာမည့် အပျိုစင်များ (ရှိုင်းဟုတ်) မြမြလှိုင် ၈၃၊ တစ်ခါသုံး လူ့အဖွဲ့အစည်း (စင်္ကာပု) နေဝင်းမြင့်၈၄၊ စာပေရေးရာ (မော်လမြိုင်) နေဝင်းမြင့်၈၅၊ ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်က (အောင်လံ) နေဝင်းမြင့်၈၆၊ ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်က (တောင်ငူ) နေဝင်းမြင့်၈၇၊ ကျွန်မနှင့် စာဖတ်ခြင်း၊ စာရေးခြင်း (ကျောက်ပန်းတောင်း) နုနုရည် (အင်းဝ) ၈၈၊ ကျွန်မဖတ်တဲ့စာ၊ ကျွန်မရေးတဲ့စာ (တောင်ငူ) နုနုရည် (အင်းဝ)၈၉၊ ရသစာပေ (အသုတ်) နုနုရည် (အင်းဝ)၉ဝ၊ စာပေနှင့် ဘဝ နုနုရည် (အင်းဝ)၉၁၊ စာရေးသူမှ စာဖတ်သူသို့ (ကျောက်ပန်းတောင်း) နွမ်ဂျာသိုင်း၉၂၊ စကားလုံးများဖြင့် ကခုန်ခြင်း ငြိမ်းမင်း ၉၃၊ ဘ0xJu ဇာတ်ညွှန်း ငြိမ်းမင်း၉၄၊ စာပေရေးရာ (မော်လမြိုင်) ဖေမြင့်၉၅၊ မြန်မာသံ ရွှေပြည် ဦးဘတင်၉၆၊ မျက်ကြည်လွှာ (မင်္ဂလာဒုံ) သန်းမြင့်အောင်၉၇၊ လူမှုဘဝ လူမှုဝန်းကျင် (မြောင်) သန်းမြင့်အောင်၉၈၊ မသိမသာ (စစ်ကိုင်း) ဦးဘုန်း (ဓါတု) ၉၉၊ ခေါင်းလောင်းသံ (မော်လမြိုင်) ဦးဘုန်း (ဓါတု)၁ဝဝ၊ အိမ် (မြင်းခြံ) ဦးဘုန်း (ဓါတု)၁ဝ၁၊ သရက်စေ့ (မှော်ဘီ) ဦးဘုန်း (ဓါတု)၁ဝ၂၊ အိမ် (တောင်ငူ) ဦးဘုန်း (ဓါတု)၁ဝ၃၊ အဖိုးပြောသော ပုံပြင်များ (မြောင်) ဦးဘုန်း (ဓါတု) ၁ဝ၄၊ သရက်စေ့ (မြောင်) ဦးဘုန်း (ဓါတု)၁ဝ၅၊ စာကောင်းပေကောင်း (ကျောက်ပန်းတောင်း) ဦးသိန်းလွင်၁ဝ၆၊ စာပေနှင့် အနုပညာ ဝင်းဖေ၁ဝ၇၊ စွန့်ဦးတီထွင် (ရှိုင်းဟုတ်) ရဲမြင့်(စွန့်ဦးတီထွင်) ၁ဝ၈၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ရောဂါ (ရှိုင်းဟုတ်) ဒေါက်တာ ကေသီထွန်း ၁ဝ၉၊ ကြက်၊ ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ (ရှိုင်းဟုတ်) ဒေါက်တာ ခင်မောင်လွင်၁၁ဝ သွေးဆုံးတာနဲ့ အိုရောလား (ရှိုင်းဟုတ်) ဒေါက်တာ ကျော်ညွန့်၁၁၁၊ သင့်အရေပြားကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ ဒေါက်တာ မြင့်မြင့်ကြည်၁၁၂၊ ကုရာနတ္ထိ (ရှိုင်းဟုတ်) ဒေါက်တာ တင့်လွင် အညွန်း - သုတရသ နှစ်သက်တယ် 34 members like this
ကြည့်ရှူ့သွားသူ - 20872
Permalink Reply by သစ်ရွက် on ဇွန်လ 24, 2011 at 3:16pm I Like it !!
Permalink Reply by ယုန်ကလေး သူရ on ဇွန်လ 25, 2011 at 4:56pm I really appreciate for featuring this post.Thank you all Admins...
Permalink Reply by အောင်အောင် on ဇွန်လ 26, 2011 at 7:14pm ကြိုက်တယ်ဗျာ ကျွန်တော် နားထောင်ချင်နေတာ ကောင်းပါတယ် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ
Permalink Reply by မြင့်မြတ်(u ohatama) on သြဂတ်စ်လ 2, 2011 at 12:35pm လိုချင်လို့ကို လိုက်ရှာနေတာ ၊ခုမှပဲတွေ့တော့တယ်။ ကျေးဇူးအထူးပါပဲ ဒကာလေးရေ
Permalink Reply by မိုးထက် on သြဂတ်စ်လ 11, 2011 at 10:01pm ကျေးဇူးပါပဲ
Permalink Reply by Mr. QC on သြဂတ်စ်လ 14, 2011 at 12:20pm ကောင်းပါတယ်
Permalink Reply by zaw myo hein on သြဂတ်စ်လ 20, 2011 at 5:32pm I am very thank you about this
Permalink Reply by maydar on စက်တမ်ဘာလ 14, 2011 at 1:40pm ဟုတ်ကဲ့ပါအစ်ကိုရေ..ကော်မန့်လေးပေးခဲ့ပါတယ်...ကျွန်တော်လဲဒေါင်းသွားပါဦးမယ်...အခုလိုတင်ပေးတာအရမ်းကို
Permalink Reply by ဇင်ထက်နိူင် on စက်တမ်ဘာလ 18, 2011 at 5:05pm တစ်ကယ်ကို ကောင်းတဲ့ ဒါန အစီအစဉ်လေးပါ။ အသိပညာတွေအများကြီး ရခဲ့ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Permalink Reply by ဂေရှောင်း on အောက်တိုဘာလ 2, 2011 at 10:02pm ကျေးဇူးအရမ်းပဲ ဒေါင်းရတာတောင် မလွယ်လိုက်တာ တင်ပေးတာ အရမ်းကြီး အံ့သြမိတယ်
Permalink Reply by ကိုယ်တော်ကြီး on အောက်တိုဘာလ 5, 2011 at 3:50am အားလုံးဒေါငင်းပြီးပြန်ရောင်းစားမယ်..ဟီးးးးးးးးးးးးနောက်တာနော် :D
Permalink Reply by ကိုယ်တော်ကြီး on အောက်တိုဘာလ 5, 2011 at 4:10am အကုန်ဒေါင်း..ပြီး..ပြန်ရောင်းစားမယ်ဗျာ...ဟားဟား..အကြည်တော်က..ပိုကောင်းတယ်..:P
5. facebook photo lock ​ဖြေနည်း
1. မငိုပါနဲ့လား ချစ်သူ
3. (မင်းဆက်ဝေ)-ရှုံးခဲ့ လား
ပိုပြီးနာကျင်ရတဲ့သူဟာ ဘာ့ကြောင့် ငါဖြစ်နေရပါလိမ့် . . . ။